Sheekada filimka Bhaiaji Superhit: Kani waa filim taageerayaasha Sunny Deol daawan karaan laakiin aan fariin wacan laheyn! – Filimside.net
Sheekada filimka Bhaiaji Superhit: Kani waa filim taageerayaasha Sunny Deol daawan karaan laakiin aan fariin wacan laheyn!
November 23, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: November 23, 2018
Waxaa tiyaatarada saaran filimka mudo dheer shaqadiisa soo socotay ugu dambeyntii la dhameestiray Bhaiaji Superhit ee Superstar Sunny Deol hogaamiye ka yahay.
Jilaayaasha filimkan: Sunny Deol, Preity Zinta, Arshad Warsi, Ameesha Patel & Shreyas Talpade
Waqtiga uu soconaayo filimkan: 2-saac iyo 20-daqiiqo.
Fariinta Filimka Bhaiaji Superhit Oo Kooban: Waa sheeko ka hadleyos Gaangester nolosha filimada soo galaayoLal Bhaisahab Dubey aka Bhaiaji (Sunny Deol) waa gaangester balse qalbi wanaagsan kaasi oo Mirzapur ku nool kana tirsan gobolka UP. Waa xaasle balse xaaskiisa xanaaqa badan Sapna Dubey (Preity Zinta) balse noloshiisa ka tagtay markii ay kaga shakisay inuu xiriir la leeyahay haweeneey carmal ah oo ninkeeda Gaangester ahaa ka geeriyooday.
Mudo 8-bilood ah ninkii Gaangester-ka Bhaiaji (Sunny Deol) awooda badnaa ma shaqeesan karo sidaa darteed kooxdiisa uu hogaamiyaha u yahay waxay u geenayaa dhaqtarka lagu magacaabo Dr. Gyan Prakash Buddisagar (Sanjay Mishra) si uu u daaweeyo.
Wuxuuna dhaqtar-kan kula talinaa Bhaiaji (Sunny Deol) inuu hawlaha gaangester iska dhaafo sidoo kalena uu noqdo qof caan ah si xaaskiisa dib ugu soo laabato wuxuuna go’aan ku gaaraa inuu filimada galo atoore caan ahna noqdo.
Goldie Kapoor (Arshad Warsi) waa filim sameeye xariif ah oo dadka lacagta ka cunno kuna nool Mumbai waxaa soo afduubayaan kooxda Bhaiaji (Sunny Deol) si uu hogaamiyahooda atoore caan ah kaga dhigo uguna sameeyo filim hirgalay.
Goldie Kapoor (Arshad Warsi) wuxuu fahmaa in Bhaiji (Sunny Deol) lacag heesto wuxuuna bilaabaa inuu qorshaha aqbalo si u lacag kaga sameeyo kooxdan dabaalada ah ee Bhaiji u shaqeeyaan.
Goldie Kapoor (Arshad Warsi) wuxuu keensanaa ninka sheekada filimada qoro Tarun Porno Ghosh (Shreyas Talpade) iyo atirishada filimada sameyso ee caanka ah Mallika Kapoor (Ameesha Patel) si ay Sunny Deol filim-kan ula sameyso.
Bhaiji (Sunny Deol) wuxuu ku mashquulsan yahay filim sameyn balse ninka ay xifaaltamaan ee burcad-ka ah Mishra (Jaideep Ahlawat) isagana awoodii Bhaiji meelo badan ku lahaa ayuu la wareegayaa.
Waxaana filimkan qaybihiisa dambe loo daawan doonaa Bhaiji xaaskiisa Sapney ma usoo laaban doontaa, shaqada Gaangester ma iska dhaafi doonaa iyo arimo kale.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan: Director Neerraj Pathak wuu dadaalay balse qaabka sheekada loo qoray ma ahan mid adag oo qof walbo soo jiidaneyso filimkiisa waa mid shactiro iyo Action leh laakiin aan qiiro laheyn sidaa darteed waa fariin kala dhiman oo aan qof walbo soo jiidan karin.
Maxaa Laga Yiri Bandhiga Jilaayaasha: Sunny Deol si wacan ayuu kaga baxsan filimkan doorkiisa Gaangester-ka iyo doorkiisa filim jilista sidoo kalena waji kale oo qarsoon ayaa jiro Funny Singh oo isagana dadka qasaayo laakiin Super-starkan dadaalkiisa meel cidlo ah ayu ku bixinayaa waayo mashrucan wax sheeko ah malahan kaliya shactiradiisa iyo Action-kiisa ayaa daawadayaasha soo jiidan karaan.
Preity Zinta door wacan ayaa la siiyay iyadana wey dadaashay laakiin fariin liidato uma noqon karto mid ay kusoo laaban karto.
Arshad Warsi iyo Shreyas Talpade marnaba kuma niyad jebinayaan filim xun xitaa wey ka dhex muqan karaan madaama shactirada iyo dhibka lagu gaarin fariimaha noocaan ah.
Ameesha Patel qurux ayay la timid goobta qaab jiliinkeedana waa dhex dhexaad sidoo kalena shaashada kuma badno waa cilad kale oo jirto.
Qiimeynta Sheekada Filimka BHAIAJI SUPERHIT: 2/5 (Labo xidig).
Gunaanad: BHAIAJI SUPERHIT waa filim taageerayaasha Sunny Deol daawan karaan gaar ahaan Action-kiisa iyo shactirada uu sameenayo balse nuxur kale malahan fariin ahaan sidaa darteed mashruucaan soo daahay wax saameyn ah lama imaan doono wuxuuna noqon doonaa filim kale oo Boxoffice-ka ku fashilmo!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka BHAIAJI SUPERHIT:
Waxaa Aqrisay 858